ဦးဝိသုဒ္ဓဝံသ (မောင်စွမ်းရည်) – “ဗုဒ္ဓသာသနာ ဤကမ္ဘာ ရောင်ဝါနေထက် ထွန်းစေသောဝ်” (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၅ ငယ်ငယ်တုန်းက သမိုင်းသင်တော့ Missionary (မစ်ရှင်နရီ)ဆိုတဲ့ စကားကို စတင်ကြား...
မောင်စွမ်းရည် – စမ်းစမ်းတင် ရေးတဲ့ လူမိုက်တွေရဲ့ကမ္ဘာ ကဗျာစာအုပ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၅ ကဗျာဆရာအမည် – စမ်းစမ်းတင် အမှာစာ – စမ်းစမ်းတင်၊ ကြည်အေး ထုတ်တဲ့နှစ် –...
မောင်စွမ်းရည် – “ ကျော်ကိုကိုရေးတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂသမိုင်း” (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၅ ကျော်ကိုကို ၂၀၁၄ ဧပြီကရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တအုပ်ဟာ အခုဆိုရင် ထုတ်ဝေခဲ့တာ တနှစ်ကြာပြီ။ “ကျောင်းသားသမဂ္ဂသမိုင်း”...
မောင်စွမ်းရည် – အညာဟန်နဲ့ ရွာပြန်မယ်ပြင် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၁၅ (၁) ရေခြားမြေခြား ၊ အမေရိကားက သမ္မတတပါး၊ “အိုဘားမား” တဲ့ “ဘားမား” ကို နှစ်ခေါက် ဆက်တိုက်ရောက်ခဲ့။...
မောင်စွမ်းရည် – အရပ်သား လူယောင်ဆောင်တဲ့ ဘီလူး (မိုးမခ) မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၅ အရပ်သား တဲ့ … ဘောင်းဘီကိုချွတ် ပုဆိုးဝတ်လဲ မချွတ် သေနတ်ပါတကား။ လူယောင်ဆောင်တဲ့ ဘီလူး …...
မောင်စွမ်းရည် – ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းထဲ မ၀င်ရဘူးတဲ့လား (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၅ ကျောင်းဆိုတာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ မော်ကွန်းထိန်းတို့ စသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလိတဦးတယောက်က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ် မဟုတ်ပါ။...
မောင်စွမ်းရည် – ဗမာပြည်နှင့် ပေးစာ၊ ပြန်စာ (ဗျာတွန်း) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၅ သမ္မတ အရွေးခံ အမြန် ပြန်လာ မြန်မာပြည်က ရွေးကောက်ပွဲ။ ငါ မပြန် အမေရိကန်မှာလဲ...
မောင်စွမ်းရည် – ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် သခင်အောင်ဆန်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်စွမ်းရည် – ကလေးကဗျာသစ် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၅ နေမင်းညိုရင် ဟိုတိုင်ခေါင်းက မိုးရေတောင်းတဲ့ ကိုဟ၀ါ။ ပိန်းလှရွက်လို သူ့အသားက ပြောက်တောက်ကျားတား ၀ါတာတာ။ တောက်တဲ့ဆိုတာ သူမဟုတ်လားကွဲ့ တို့အိမ်နားလဲ တကောင်ပါ...
မောင်စွမ်းရည် – အရင်လူ
မောင်စွမ်းရည် – အရင်လူ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၅ နောက်လူကို အရင်လက ငါ – အရင်လူဆိုပြီး အလိုလို ဘ၀င်မြောက် နောက်လူကို အထင်သေး အမြင်ဝေးခဲ့။ နောက်လူဆိုပေမယ့်...
မောင်စွမ်းရည် – သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာအောင်ခင် အတွက်
မောင်စွမ်းရည် – သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာအောင်ခင် အတွက် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ကဗျာ လေးချိူး (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၅ သြော် … ဆွေအရင်းရယ်လို့ သေမင်းကိုတားလုို့ မဖြစ်နိုင်ဘု ထားရစ်ပေတော့ သူငယ်ချင်းရေ။...
မောင်စွမ်းရည် – ကဗျာကို ဖျက် အမျက် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၅ လောဘ၊ ဒေါသ မောဟ၊ မာန ဘာမှ မကောင်းဘူး။ တခုထက်ရင် အားလုံးတက်ပြီး တခုဖျက်ရင် အားလုံးပျက်ရော။...
မောင်စွမ်းရည် – နှစ်သစ်ဆုမွန် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၅ နှစ်ဟောင်း ခေတ်ဟောင်း အဟောင်းပယ်ခြွေ။ နှစ်သစ် ခေတ်သစ် အားသစ်ကြလေ။ အဟောင်း အညစ် ပြောင်းရစ်ကြစေ။ လူသစ်...
မောင်စွမ်းရည် – ပန်းမြန်မာတွေ လာတုန်းက (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ နယူးယောက်ကို ဗမာစာရေးဆရာတွေ လာခဲ့ကြတယ်။ ကြုံဝင် ခဲ့ပါလေ။ ခရီးကြုံလို့ ဝင်လာကြတာပါ။ ဗမာပြည်က စာရေးဆရာ တွေက...
မောင်စွမ်းရည် – ဇရာတံဆိပ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ တုတ်ကောက် မျက်မှန် အံကပ် နားကြပ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ဆယ်နှစ်ကြာ ဇရာတံဆိပ်ကပ်။ ။ (အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄)...
မောင်စွမ်းရည် – လျင်သူစားတမ်း
မောင်စွမ်းရည် – လျင်သူစားတမ်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄ သင်ပုတ်ပလ္လင် ဆွမ်းတော်တင် မျောက်ဝင်လို့ စား။ မျောက်ကို ခွေးဟောင် ဟောင်တဲ့ခွေး ကြောင်ကုတ်။ သင်ပုတ်ပလ္လင် ကျီး...
မောင်စွမ်းရည် – ပြည်တွင်းစစ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄ ဒိန်းသံ ဒိုင်းသံ၊ ပစ်ခတ်သံ ဆူညံမပြတ် ဒရစပ်။ ငိုသံ ရှိုက်သံ၊ အံကြိတ်သံ တယံမပြတ်၊ ခေတ်ပြဇာတ်။ မောင်စွမ်းရည်၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ...